Ciidanka dawladda Soomaaliya oo ku dhawaaday Jawhar. – Radio Daljir
Nofeembar 18, 2012 2:12 b 0
Jawhar, Nov 18- Ciidamada dowladda Soomaaliya oo wata gaadid dagaal oo kala gadisan ayaa saaka ku dhaqaaqay deegaanka Gari-saale oo ku dhaw magaalo madaxda gobolka Shabeelaha dhexe ee Jawhaw.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidanka dawladda Federaalka ee Soomaaliya aysan haba yaraatee wax iska caabin ah kala kulmin xooggaga Alshabaab intii ay ku dhex safrayeen jidka xiriiriya degmada Balcad iyo deegaanka Gari-saale oo ay hada ku sugan yihiin.
Degmada Jowhar oo 90-km dhinaca waqooyi ka xigta magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa ah degmadii ugu dambeysay oo magaalo madaxa gacantana ugu jirta xooggaga Alshabaab ka dib markii dhawrkii bilood ee la soo dhaafay ay lumiyeen awwooddii ay ku lahaayeen inta badan magaalo madax-yada gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka.
Xaaladda degmada Jowhar ayaa deggen iyadoo dadka ku sugan degmadaas ay sheegeen in wax walba ay si caadi ah u socdaan, ayna degmada ku sugan yihiin xoogagii Al-shabaab ee horay u joogay, balse ay jirto saan-saan colaadeed oo laga dareemayo furimaha xarakada iyo kantarooladda laga soo galo magaalada.
Dowladda Soomaaliya oo garabsanaysa ciidamada ka socda Midowga Afrika ee Amisson ayaa waxay tan iyo horraantii sannadkan dagaal ay deegaanno badan ku qabsadeen la galeen xoogagga Al-shabaab, waxaana goobaha ay ka qabsadeen ka mid ah magaalooyinka Kismaayo,Balad-weyne,Baydhabo iyo Gar-bahaareey.